Oduu Ammee – Site Title
Posted byabdiaminbakar 26th Jul 2021 Posted inUncategorized
Mootumaan Naannoo Oromiyaa caasaa hooggansa naannoo hanga gandaatti jiru reform gochuuf qophii xumure..
Rakkoo guddaan Oromiyaa tasgabbiii dhorkee waggoottan hedduf Uummata fi Mootummaa walitti buusaa ture, caasaa hoogansaa kaleessa Biyya saamaa fi saamsisaa turee fi Abbootttii qabeenyaa TPLF waliin Oromiyaa saamaa turedha.
Pirisdenti MNO Kabajamoo Shimallis Abdiisaa
Gareen kun ammas caasaa Mootummaa keessa taa’anii, Uummata dararuun, Mootummaa fi Uummata walitti buusaa jiru.
Kaayyoon isaanii, Uummanni Mootummaa amma jiru kana akka hin ammanee fi shakku gochuun fincili ka’ee biyyattii tasgabbii dharkuudha.
Biyyattiin tasgabbii erga dhorkamee ammoo, Yakkoota fi saamicha kana dura taasisaa turaniif itti gaafatamummaa jalaa bahuufidha.
Hoggansa uffata ofii jijjirrachu malee ,sammuu Ummata keenya jijjiree hin beekne hunda Haaromsa kanan qulqulleessa deemun barbachiisadhaa. Abdi Amin Bakar
Mootummaan Naannoo Oromiyaas shira kana gadi fageenyaan xiinxaluun, partii amma haaraa ijaarame waliin hattootta kalessa Biyya saamanii ammas maqaa jijjiramaan dhokkatanii uummta dararaa jiran irratti tarkaanfii irra deebii hin qabne fudhatee, humna haraa Darggaggoota beekumsaa fi dandeettii qabaniin bakka buusuuf hiccittiin hojjechaa ture, amma hojii irra oolchuuf jiru.
Nuttis gama keenyaan, Mootummaan kun gaaffii ummataa haqaan deebisuu yoo barbaade, akkasumasa biyyattiin akka tasgabooftu yoo barbaade, dirqama caasaa isaa gara gadii, Aanaa fi Ganda irra jiran to’achuu qaba.@Abdi Amin Bakar
Abboottii qabeenyaa Qabeenya ummataan durooman seeratti dhiheessuunnis dirqama.Kun immoo kan ta’u, dargaggoota beekumsuu fi dandeettii qaban gara hooggansaa fi hirmaannaa diinagdeetti fiduudhaan qofa.Abdi Amin Bakar
Yoo kana goottan, rakkoo amma akka biyyattiittis ta’ee akka Oromiyaatti ummamaa jiruuf furmaata filannoo hin qabne ta’a.
Veva #Shimee Seenaa bara baraan yaadatamu hojjechuun akkanatti.
#Share gochuun yaada kana deggarsaan dhugoomsaa!
Dhugaan Jiru Kanuma Liqimsii